Sale & Marketing Trainee-Market Expert for Blue Ribbon Trading Company Limited | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Sales & Marketing Jobs - Sale & Marketing Trainee-Market Expert
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြေပြစ်စွာဆက်ဆံနိူင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Teamwork စိတ်ဓာတ်ရှိရမည်။
•	စားသောက်ကုန်၊ အလှကုန် လုပ်ငန်းများတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
•	လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (1) နှစ်ရှိရမည်။
188, Botahtaung Zay St.,Pazundaung Township
Company Industry: Sale & Marketing Trainee-Market Expert
•	ရေမွှေး၊အလှကုန်၊စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း တွင� ...
• Account Payable/ Account Receivable ကို တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။ • ဖစ်ေ� ...
• Assigning job and managing daily task of warehouse Staff. • Making daily planning for loading. • Delivering go ...
Job Description -ရေမွှေး၊အလှကုန်၊စားသောက်ကုန်လုပ်ငန� ...